uDkt Karen Bargate (ongaphambili) ekupheleni komjaho wakhe.
Ababaningi abantu abanomfutho wokwenza i-surf swim ye-1.9Km, ama-90.1km okushova ibhayisikili kanye nama- 21.1km okugijima. UDkt Karen Bargate weSikole Sokuhlelwa kwamaBhuku Ezimali, Ezomnotho neZezimali akazange nje akwenze konke kokuthathu kuphele, kodwa waphinde waphuma phambili esigabeni sabaneminyaka yakhe (60-64) kumjaho osanda kwenzeka we-Durban Ironman 70.3 triathlon. UBargate ukleliswe waba owesithupha esigabeni sabaneminyaka yakhe emhlabeni jikelele.
I-Durban Ironman 70.3 triathlon series iyingxenye yenhlangano ye-Ironman emhlabeni jikelele ebamba imicimbi engaphezu kwama-260 emazweni angama-44. Lo mjaho, obubanjwe kulenyanga (Nhlangulana), uqale ngombhukudo eShaka Beach kwalandela umjaho wamabhayisikili ohamba eBlue Lagoon uze uyophumela emgwaqeni omkhulu u-M4, kugcine umgijimo ozungeza endlelini ehamba abantu.
Ukuze alungiselele lo mjaho okhathazayo ngokwenyama nangokomoya, uBargate uqeqesha neqembu i-Team TriLab kanye nomqeqeshi. Uphinde ashove amabhayisikili nomyeni wakhe, uGrahame ngempelasonto.
Uthe ‘Ngaqala ukubamba iqhaza ku-70.3 Ironman eThekwini ngonyaka wezi-2016. Kusukela lapho ngenza umjaho eThekwini ngonyaka wezi-2017 kanye nase-Vichy, e-France. Ngonyaka wezi-2018, ngenza i-70.3 Ironman Buffalo City, e-East London, kanye nomjaho wase Thekwini. Ngajabula kakhulu ngokuphuma phambili njengoba sengike ngabaphuma indawo yesithathu kabili e-Vichy kanye nase East London, kwabamnandi kakhulu ukuphuma phambili. Kwangisiza ukuvuka ngovivi njengoba ngivuka ngehora lesine ekuseni izinsuku ezine ngesonto ngiziqeqesha.
Emuva kokubamba iqhaza emncintiswaneni walolu hlobo, bekulindeleke ukuthi uBargate ehlise kancane. Kodwa, lo msubathi osebenza kanzima wathatha ikhefu lesonto elilodwa vo emva komjaho kanti futhi usezilungiselela olandelayo.
Uthe ‘umjaho wami olandelayo yi-South African duathlon championship ezobanjelwa e-Midmar Dam mhla zizinye kuNtulikazi, ngizowusebenzisela ukulungiselela umncintiswano womhlaba jikelele. Ngizoqhubeka nokuqeqesha kuze kufike umncintiswano we-70.3 womhlaba jikelele ozoba zizinye kanye zimbili KuMandulo e-Port Elizabeth. Ngijabule kakhulu ngoba indodakazi yami, u-Erin, owayengumfundi wase-UKZN, uzokwazi ukungenela umncintiswano womhlaba jikelele okusho ukuthi sizobe siqhudelana’
Amagama: Thandiwe Jumo
Izithombe: Grahame Bargate